April 2020 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Apr 30, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 08-09-1441 …
Dhageyso Kitaabka Keyfa Caamalahum ﷺ Oo Uu Jeedinayo Sheekh Cali Katiin (07)
Dhageyso Kitaabka Suwar Min Xayaat As-Saxaabiyaat Oo Uu Jeedinayo Sheekh Cabdil Ilaah (07).
Dhageyso Qeybta 7-aad Barnaamijka (Al-Xuruubu Saliibiyah)
cusmaan	 Apr 30, 2020 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Khamiis taariikhda hijriguna waxay ku…
Roobabka Guga oo si wanaagsan u da’aya iyo Magaalooyin ay Daadad ku dhufteen.
Gobollada Soomaaliya waxaa ka da'aya roobabka Guga, kuwaas oo si wanaagsan u da'aya, waxaana meelaha qaar uu roobku wataa dabeylo saameyn dhaliyay. Magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa lagu soo waramayaa in webiga uu sameeyey…
Howlgallo Kala duwan Oo Saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay Gobollada Dalka.
Saacadihii lasoo dhaafay, ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay qaadeen weeraro kala duwan oo beegsaday ciidamada Shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku kala sugan qeybo kamid ah dalka. Muqdisho, Qaraxyo xoogan ayaa…
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Saaka waa khamiis taariikhda hijriguna waxay ku…
Axmad	 Apr 29, 2020 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 07-09-1441 …
Dhageyso Qeybta 6-aad Barnaamijka (Al-Xuruubu Saliibiyah)
cusmaan	 Apr 29, 2020 0